Afqalaad Aqoontu Miyaa
Af-qalaad Aqoontu Miyaa? :
Maxaa keenay in dadka Soomaaliyeed ay afkoodii hooyo kadoor bidaan afaf qalaad?
W.Q A.C.M. Khayre iyo M.C.Cibaar
Qormadan aan ku magacownay af-qalaad aqoonta miyaa? Waxa kalifay in aan qorno, kadib markii aan aragnay xaaladda qatarta ah ee uu kusugan yahay afkeennii hooyo, kaasoo la dhihi karo, diinta oo ay Soomaalidu 100% muslim tahay ka sokoow, waa xididka ugu muhiimsan ee maanta isku haya guud ahaan Soomaali weyn meel kasta oo ay joogto, Maadaama arrimihii kale ee umadda isku hayey ay dhibaatooyin ka taagan yihiin; sida calankii,dhaqankii, dhulkii iyo wada dhalashadiiba.
Soomaaliya waxa ay nasiib u yeelatay in ay kamid noqoto saddexda wadan ee qaaradda Afrika looga hadlo halka luqad, iyada oo labada kalana ay yihiin Swaziland iyo Lesotho oo ah waddamo aad u yar yar. Bal akhristow u fiirso nimcada Ilaahey nasiiyey ee aan laga faa’iidaysanayn. Wadanka aan dariska nahay ee Itoobiya, waxaa looga hadlaa in kabadan 70 luqadood oo leh 200 oo lahjadood.
Hadaba qormadan haddii Alle idmo waxaan rabnaa in aan ku eegno su'aalo ay udub dhexaad u tahay: maxaa keenay dadka soomaaliyeed oo Ilaaheey nimcadaas ku galadaystay uuna siiyey hal af, ay maanta kuwada xiriiraan luqado qalaad?
Quursiga iyo ku qanacsanaan la'aanta Af- Soomaaliga
Haddii aad u fiirsatid inta badan Soomaalida qurbe-joogta ah, mar mar waxaad isweydiinaysaa goorma ayay qasab noqotay in lagu wada xiriiro afaf qalaad ; sida kala qorashada telefoonada, cinwaanada iyo wixii lamid ah. Waxaa suurto gal ah in aan inteenna badan aragno laba qof oo soomaali ah oo ku xiiqsan ineey isku yeeriyaan lambar telefoon oo ka kooban toban lambar ama ka yar, maaddaama labadooda midkood ay ku adagtahay luqadda wax leysugu yeerinayo, iyadoo lagaba yaabo in tobankaa lambar lagu kala sheego dhowr luqadood oo kala duwan sida ( oow, two, sei, acht …..iwm.).taasoo laga yaabo in waqti dheer uga dhumo,oo haddana waliba ay suurto gal tahay in wixii leysku yeerinayay qalad loo kala qorto. Hadaba walaalayaal miyeysan ahayn wax lays weydiiyo, maxaa na geliyay dhibaato aan alle nabadin? Oo keenay inaan quursanno kuna qanci weyno afkeenna qaaliga ah!!.
Dadka luqadaha kale wax ku soo bartay ayaa iyaguna ku tacaddiya luqadda Soomaaliga,waxaadna arkaysaa marar badan iyada oo aysan hadaladooda lasocon karin dad aan aqoon ulahayn luqadaha qalaad oo ay isticmaalayaan. Lama inkiri karo in ay jiraan erayo-cilmiyeed badan oo aan weli la Soomaaliyeyn, laakiin ma ahan in 'off course, allora, iyo Maca-daalika, iwm laga dhamaan waayo.
Waxaa kale oo in laxuso mudan shirar badan oo weliba lagu magacaabo shirarka aqoonyahannada, kuwaasoo aad arkayso in la dafirayo af-soomaaligii laguna daadihinayo luqado qalaad. Shir dadka jooga ay 99% Soomaali yihiin ayaa waxaa dhacda in luqadda shirku ku socdo ay noqoto mid qalaad. Waa la yaabe, ma 1% ka ajnabiga ah ayaa lagu qadarinayaa arintaas, mise ku hadalka afka qalaad ayaaba, ammaan, iyo ilbaxnimo loo haystaa?
Heerka ay gaartay xaqiraadda uusan mudneyn ee la xaqirayo af-soomaaliga waxaad si dhab ah uga arki kartaa dhaqanka qaabka daran oo ay la yimaadeen siyaasiyiin isku sheegga maanta Soomaalida horkaca. Bal u fiirso qoraaladda ka waramaya qorshahooda waxqabad ee ay soo bandhigeen kuwa isku sharaxaya hogaanka wadanka dhammaantood, imisa ayaa ku qoran af-soomaali? Imisa ayaase ku qoran af ingiriis? Waxaa lays weydiin karaa qoraaladani ma barnaamij loogu tala galay dadka Soomaaliyeed ineey aqristaan oo ay fahmaan si ay wax ugu qiimeeyaan baa, Mise waa lifaaq lasocda arji ku socda qoom iyo qaarado kale?!.
Sida aan ognahay waqtigii gumaysiga waxaa wadanka arimihiisa oo dhan mas'uul ka ahaa dowladihii yurub ee na haystay. Waqtigaas si qofku shaqo uga helo dowladda waxa uu ku qasnabaa in uu ku hadlo luqadda gumaystaha. Gumaystayaashuna waxa ay shaqooyinka yar yar ku aamini jireen Soomaalida luqadooda taqaanna. Taas oo aqoontiiba ka dhigtay ku hadalka luqaddii gumaystayaasha. Markii uu gumaysigu tagayna waxaa wadanka jagooyinkiisii dhaxal u helay dadkii luqadaha ajnabiga ah bartay. Marka la eego aqoonta kale waxaa xusid mudan in 1960kii Soomaalida aqoontoodu ay gaarsiisantahay heer jaamacadeed oo xitaa lagu daray ardadii jaamacadaha dhiganayay ay guud ahaan tiradoodu ahayd 27 qofood.
In kasta oo xukunkii milatarigu uu hirgaliyey qorista iyo akhriska Af-soomaaliga ayna soo baxday halhayskii caanka noqday ee " afkii qalaad hamoodin carrabku qaldi maayee sidii caanaha qurquriyaay”, haddana arintaasi ma hakin qiimayntii xad dhaafka ahayd ee ay dadka Soomaaliyeed u hayeen luqdaha qalaad. Taasna waxaa ka qayb qaatay maamul xumadii xukunkii milaratiga oo isaguna markiisa jagooyinkii muhiimka ahaa inta badan u dhiibay dad u daacad ah oo aan aqoontoodu dhaafsiisnayn qoridda iyo akhrinta Af-soomaaliga. Waxaana arrintaa ka marag kacaya hal ku dhaggii hirgalay ee "jaahil kacaan ah ayaa ka mudan jaamici kacaan diid ah". Xaalkii wuxuu noqday "ka dar oo dibi dhal"Arintaas iyo kuwo kalena waxay keeneen, in dadkii ayba lasii colloobaan luqaddoodii, qaar badanna ay la noqotayba in caddaalad darrada iyo horumar la'aantii jirtay uuba Af-soomaaligu masuul ka ahaa.
Bur burkii dowladdii dhexe ee Soomaaliya waxaa ay dhalisay taag darro ku sii timaadda isticmaalkii Af-soomaaliga. Waxaa meeshii ka baxay manhajkii dhexe ee waxbarashada Soomaalida oo kaalin weyn uga jiray kobcinta Afsoomaaliga sida horumarinta eray-cilmiyeedyada iwm. Waxa kale oo iyaduna meesha ka baxday luqad xirfadeedkii iyo tii maamul ee dowladda.
Horraantii sagaashameeyadii, markii ay hay'adihii ajnabigu gargaarka iyo shaqooyinka u aadeen Soomaaliya, ayaa waxaa badatay baahidii iyo isticmaalkii afafka qalaad, waxaana cirka isku sii shareeray qiimahoodii. Waxaa kale oo door lixaad leh ka qaatay tabardarrada ku timid afkii soomaaliga, qixii ay dad u badan dhallinyaro oo soomaali ahi qurbaha ku yimaadeen. Taas oo lagama maarmaan ka dhigtay, in dadkaasi ay aad isugu howlaan barshada afafkii waddamada ay u qaxeen si ay ula qabsadaan nolosha cusub ee la soo deristay.
Waxaa muuqata khatar weyn oo ka imaan karta dayicidda Af-soomaaliga, oo ay ugu horeyso in uu meesha ka baxo xiriir aad iyo aad muhiim u ahaa oo aan ku tilmaami karno xidid xooggan oo isku haya ummadda Soomaaliweyn. Waxaa muuqata inuu meesha ka baxayo xiriirka ehelada iyo isgarabsigii qaraabannimo. Waxaanan la wada soconnaa in loo kala turjumo caruur walaalo ah oo kala joogta labo qaaradood. Waxaa sidoo kale dhacda in waalid iyo carruurtiisii ay is fahmi waayaan oo ay dani qasabto in loo kala turjumo. Bal waa yaabe maxay isku yihiin dad iyagiiba loo kala afcelinayo?!.
Halis aan la fududeysan karin ayaa iyaduna ka soo muuqata, xiriirka sii kala fogaanaya ee ummadda iyo qaar aqoonyahannadeedii mustaqbalka ka mid ah. Maxaan ku timaami karnaa xaalka dhaqtar soomaaliyeed oo aan waxba ka fahmeeyn cabashada bukaankiisii soomaaliga ahaa! ama injineer soomaaliyeed oo shaqaalihiisa weydiinaya waa maxay shub, tiir, darbi iwm.
Dad badan oo aqoontoodu wax tar yeelan lahayd oo iska dhaadhiciya in aanay waxba qaban karin maadaama ayna luqadaha ajbaniga ku hadlin iwm. Halkaasna waxaa ka dhasha barabixin lagu sameeyo aqoon badan oo loo baahnaa.
Waa arin aad u muhiim ah in la ogaado qiimaha ay dadka u leedahay luqadooda oo ah sharaftooda iyo jiritaankooda . Dadka Soomaaliyeed oo intooda badan cel celis ahaan jooga qurbaha 7 illaa 9 sano, ayaa waxaa wax laga naxo ah in uu si xowli ah uga sii tirtirmayo afkoodii iyo dhaqankoodiiba, iyada oo ay dadyowga qaarkood oo ku noolaa qurbaha gaar ahaan wadamada reer galbeedka in kabadan 50 sano ay weli si wanaagsan u dhowrtaan luqadooda, dhaqankooda, diintooda iyo jiritaankoodaba.
Dowladaha horay u maray ama ay hogaamiyaan dadka wax garadka ah waxaa lagu dadaalaa in la adkeeyo hirgalinta luqadda, xitaa waxa ay ku bixiyaan kharash iyo shaqo badan sidii luqadooda kor loogu qaadi lahaa. Bal aan fiirinno dadaalka ay u galaan adkaynta luqadooda wadamada ku bahoobay midowga Yurub. Golaha baarlamaanka Yurub waxa uu hadda kakoobanyahay 626 qof, taas oo lafilayo in ay noqoto illaa 732 marka ay kusoo biiraan wadamada cusub sanadka foodda inagusoo haya ee 2004ta. Waxaa xusid mudan in kulamada baarlamaanka, xubin kasta loo ogolyahay in ay ku hadasho luuqadeeda. Xubnahaas oo ka kala yimid wadamo kala duwan. Wadan walba waxa uu ku adkeystay in uu luuqaddiisa ku hadlo, hadalkaas oo isla markiiba la turjumayo . Turjumaadaas hadalka waxaa sii dheer kan qoraaladda ay xubnuhu soo gudbiyaan oo dhan. waxaana halkaas ku baxa lacago aad u farabadan oo gaaraya malaayiin doolar sanadkiiba. Xubnahaas baarlamaanka ku jira waxa ay u badan yihiin dad ku hadla luqadaha ay ka midka yihiin Ingiriiska iyo faransiiska iwm, kuwaas oo ay si fudud isugu af garankaraan. Laakiin waxa ay doorteen in xubin kasta ku hadasho luqadeeda, taas oo noo cadaynaysa sida dunida horay u martay ay u danaynayaan uguna dadaalayaan jiritaanka luqadooda asalka ah, tasoo ah dhaxalka ugu muhiimsan oo ay u dhaafayaan dhallaankooda.
Axmed Cali M.Khayre, iyo Maxamed Cali Cibaar
...AFSOOMAALIGA OO QARKA U SAARAN IN UU KASUULO LUQADAHA AFRIKA
...QAABKA QORAALADA LOO QORO.....
....SHURUUDAHA QORAALKA KUSOO BAXAYA SOMALITALK
.... Xuquuqda Qoraalada.....